Atụmatụ ahịa ahịa dị iche iche nke Digital site na nkwụsịtụ iji mee ka ụba ego dị na ụlọ nkwari akụ gị
Ụlọ ọrụ ile ọbịa na-adọta ndị ahịa nwere uto na mmasị dị iche iche.Ọtụtụ ndị ahịa na ụlọ ọrụ ahụ nwere mkpebi siri ike na-agbalị ịnyocha nyocha ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ okwu ndị na-emekarị dị ka "ahịa ọdịnaya" ma ọ bụ "nnukwu data".Ọ na-eme ka ndị isi ụlọ ọrụ na-etinye aka na usoro aghụghọ ma na-echefu ego ahịa ka ha na-eji onye na-ahụ maka akpaaka azaghachioku ekwentị. Ọ bụ ihe ọjọọ, na ndị nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ kwesịrị ịlaghachi na isi site na-elekwasị anya na ihe dị ịrịba ama-ọbịa.
Dịrị ala ahịa dị mkpa, dị ka ọ dị mkpasite na Andrew Dyhan, onye ahịa na-ahụ maka ihe ịga nke ọma Ọcha .
Meziwanye ọhụụ na-ede akwụkwọ ndị ọbịa - new online casinos usa friendly.
Akụkụ kasị mkpa nke ịzụta ụlọ nkwari akụ bụ ahụmahụ akwụkwọ ntinye akwụkwọ.Dị ka ọkọlọtọ Statistic si kwuo, 58% nke ntinye akwụkwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eme ntanetị. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu. Ebe obibi weebụ nke ụlọ nkwari akụ dị mkpaakụkụ nke ntinye akwụkwọ n'ịntanetị. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-adọta 'homepages siri ike ịnyagharị ma mee ka ndị ọbịa rụọ ọrụ siri ikeụlọ ụlọ. Ndị mmadụ ekwesịghị ịpị "ihe oriri" ma ọ bụ "ebe obibi" ma chere ruo awa ole na ole tupu ibe ahụ agafee. Ọzọkwa, otuezigbo ụlọ nkwari akụ nkwari akụ kwesịrị inwe ngalaba ebe onye ọbịa nwere ike ịpịgharịa wee chọpụta ozi dị mkpa tupu ịdebe ọrụ. Ndị ọbịaga-achọ ịhụ ọnụ ụlọ, ntụle, nlele na igbe nchekwa. Ịmepụta atụmatụ SEO dị irè nwere ike inyere aka melite ahụmahụ a.
Mụta eziokwu banyere SEO na ụlọ ọrụ ọbịa.
Ndị ọbịa nọ n'etiti ndị na-akpachi anya SEO kemgbe 2004. N'oge ahụ,otu ụlọ nkwari akụ nwere ike ịdebe mkpụrụ okwu n'ime mkpado na-adịghị ahụ anya na saịtị na search engines dị ka Google ga-edepụta isiokwu dị ole na oleọnwa mgbe e mesịrị. Otú ọ dị, ihe niile agbanweela ugbu a, Google algorithm indices na-echekwa otu saịtị n'ime ụbọchị. Ọzọkwa, Google na-eji ya eme iheRankBrain, nke nwere ọgụgụ isi iji guzobe n'eziokwu ziri ezi. Ọ na-egosi na azụmahịa enweghi ike ịchịkwa yaachọ ọkwa. SEO bụ ọrụ na-abaghị uru, ndị nwe ụlọ ahịa nwere ike ịgbanwefe ego ego SEO iji zụọ ahịa mgbasa ozi ndị ọzọ dịka mgbasa ozi.
Ghọta njikọ dị n'etiti mgbasa ozi ọha na eze na nlekọta.
N'akụkụ a, ọtụtụ ndị na-eme njem nlekọta na-agbaghara n'ihi ọsọ ọsọnke mgbasa ozi dịka Snapchat na Facebook nọgidere na-eto eto. Ọ bụ ihe amamihe dị na ndị nlekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ iji ghọta ihe kasị mma mgbasa ozi ọha na eze iji jiri dijitalụahịa. Ikekwe, o kwesịkwara inye aka n'ịmepụta ahụmahụ SEO. Ndị ọkachamara na-egosikwa na ndị nwe ụlọ nkwari akụ aghaghị itinye ego na ịmepụta vidiyoebe ọ bụ na pasent 67 nke ndị ọbịa na-ekiri mmepụta njem na njem tupu ha edea ụlọ. Vidio na-enyekwa ndị njem ihe ka mma.
Jide Instagram na Facebook.
Ọ gaghị ekwe omume ịnọ na ntanetị mgbasaozi ọ bụla, mana ndị na-eme njem nletakwesịrị ịbụ na abụọ a. Ndị ahịa ọhụrụ na-adabere na nhazi ndị a iji chọpụta ma ọ bụrụ na nkwari akụ nke onye ọ bụla ka nọ na-arụ ọrụ.
Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ mụbaa.
Ọtụtụ ụlọ ezumike nka anaghị ama ndị na-eso ụzọ ha. Enweghi narị Fans enweghị ikeakwalite ahịa igwe di iche iche na ulo oru ndi ọbịa.
Nye onyinye nyeere mgbasaozi mgbasa ozi.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ikpo okwu nke na-achọ ka ndị isi ụlọ ọrụ na-etinye ego site na ndị ọkachamara na-akwụ ụgwọ.Ha kwesịrị inwe echiche nke ụdị, ịmepụta, na ọchị na mgbakwunye na nkà na foto na nkà.